Socdaalkeyga Muqdisho – SOMTA | Somali Tourism Association,Somali Hotels,Somali Restaurants,Somali Tourisms
Muqdisho markaan tegay waxaan degay hotel ku yaal dhanka waqooyi ee magaalada, kaas oo ahaa meel aad iyo aad u xasiloon, oo ka muuqato bilicsamida magaalada Muqdisho. Xafadaha ku kulansan waddooyinka waaweyn is ku xira qeybaha kala du-duwan ee magaalada waxaa ka socda ganacsiyo waaweyn ee inta badan leeyihiin dadka ka yimid dibeda. Dadka ka yimid dibedda oo loo yaqaan “Diaspora” ayaa ah dad intooda badan niyad u hayo jawiga ganacsi ee lagu hormarinayo magaalada Muqdisho. In kastoo magaalada ay magaaladu ka muuqdaan daqarradii dagaalka sokeeye, hadane waxaad arkaysaa boorar waaweyn ee aad u xardhan ee lagu xayeysiinayo ganacsiga ay leeyihiin shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay.
Amniga xaggiisa, waxaad moodaa in sidiisii hore ka wanaagsanaanayo, balse weli waxaad arkeysaa iska hor imaadyo aan sidaas u badneen. Dadka caadiga ah waxay arrinta amniga ka aaminsan yihiin in nabadgelyada Muqdisho ay soo wanaagsaneyso oo waxaad arkeysaa magaalada oo laga soo jeedo habeenkii xilli danbe.
Xagga dhaqaalaha waxaa wax lagu kala iibsadaa dollar, $ oo welibo u dheertahay in $1 aan laga oggoleyn suuqa wax lagu kala iibsado illeyn waxba ma gooyee.
Haddii aan si gaar ah aan u milicsano jewiga waa xilli xagaayo oo roob mahigaan ah ayaa Alle magaalada ugu nimceeyey. Jawi waa mid deggan oo qabowga awgiis oogada u muhaneyso. In kastoo roobabka dhaliyeen daadad hakiyey isku socodka gaadiidka ayaa waxaad arkeysaa in waddooyinka isku xiro xaafadaha Muqdishu ay weli gaadiidku soconayaa.
Teeda kale waxaad moodaa in ay Muqdisho siyaasad ahaan u soo koreyso oo waxaad waddooyinka iyo dhismaha dowladu ay gaar ka hayaan ciidanka dowladda oo intooda badan gaadiidka joojiyaan waxayna wadayaashu weydiinayaan warqad aqoonsi oo marar baa dhacdo in ay baaraan gudaha gawaarida si loo sugo amniga.
Si kastaba ha ahaatee, waxbarasho waa heer sare, oo magaalada waxaad ku arkeysaa labaatameeyo jaamacadeed oo dhallinta wiilal iyo gabdhaba ay waxbarashada ku hawlloon yihiin, waalidiintuna garab ku siinayaan inta awoodooda ah. Waxaan marqaati cad noqoneyso mar aan tegay xafiis oo gabar ka ahayd xogeyn in ay hanatay ku shaqeynta computer-ka oo weliba si xirfad ahaan gacmaheeda aad arkeysid in ay u carbisanyhiin. Waxaa intaa u sii dheer ixtiraamka maareynta caalemiga ah ay ku shaqeyneysay, “Walaal maxaan kuu qabtaa?” ” Fadllan fariiso ded-deg baa laguu caawinayaa.”
Laakiin waxaa weli dadku baran safka iyo kala horreynta oo marka ay dadku wada taaganyihiin safka waxaa haboon in laysku ixtiraamo oo waxaad arkeysaa qof safka dabadiisa ka soo hinqanayo oo kaa hormarayo weliba isagoo qaladkiisa ku indhacad.
Dhallinta intooda badan ma shaqeeyso, waxaan ka xumaaday in shaqaalaha shaqooyinka hoose qabta ay yihiin Kenyaan iyo Ugaandhees oo isku dayayo in ay ku hadlaan af-Soomaaliga, taasi waxaan uga danleeyahay hoteellada waxaad ku arkeysaa nin keynyaati ama Ugaandheeska ah oo madbakha ku jira ama maamulka hayo. Taa mar aan weydiiyey milkalaha hoteelka lehna maqaayad aad u qurxoon sababta uu u shaqaaleysiin waayey dhallinta Soomaaliyeed? Wuxuu jawaabtiisu ahayd, “Dhallinteyno ma jeclo in ay dhulka iyo miisadaha maqaayadda tir-tiraan oo weliba hadii la amro ay wejigooda ka muuqanayso caro iyo dulqaad la’aan, waayo ma jeclo in amar la siiyo.”
Hadii aan taan ka gudubno, Muqdisho wey ballaratay oo waxay u fiday dhan kasto oo dhul ka xigay. Waxay dadka dalka ku soo noqonayo intooda badan ku mashquulsanyihiin siday u dayac tiri lahaayeen guryaha dagaalka burburiyey. Waxaad arkeysaa in dhismaha guryaha loo adeegsado alaado casri ah oo aan waagii hore jirin, balse weli waxaa la dabooli Karin baahida shaqaalaha dhismaha loo qabo.
Waxyaabaha aan aad ugua jecleystay Muqdisho waxaa ka mid ah: dhallinta yar-yar ee qurbaha ku dhashay oo intooda badan aad ku arkeysid badda Liido iyagoo gabdho iyo wiilal leh oo ku dabaal- joogteynayaan hirarka nadiifka ah ee badda Badweynta Hindiya. In dhallinto booqdaan meelaha dalxiiska loo tago, waxaa ugu wacan shirkado aqoon u leh dalxiisaka sida (Somali Tourism Association (SOMTA) oo si sahllan ugu adeegta dadka daneynaya dalxiiska. Waxay shirkaddu kaashataa ardada Jaamicadaha si ay sare ugu qaado niyaddooda. Waxayna taa wax weyn ka tareysaa in ay xirfado u noqdaan markay waxbarashadooda dhameystaan.
By Webmaster|2013-09-15T19:49:19+00:00September 15th, 2013|Somali|2 Comments
Liban September 15, 2013 at 9:29 pm - Reply
Masha Allah wa so dhawaynaynaa dadka dib uGu so laabanaya wadanka isla markasna wax ka qoraya. Mahadsanid Cumar Axmed
farhiya October 19, 2013 at 7:55 am - Reply
adigaa mudan Mr.liiban soo dhawoow walaal, sidoo kale waxan soo dhaweyneynaa qurba joogta Somalida ee dalka dib ugu soo laabanaya sida Dr.Omar Ahmed.